Kick Boxing – Sina: mpikatroka efatra hanao tsapan’ady voalohany | NewsMada
Kick Boxing – Sina: mpikatroka efatra hanao tsapan’ady voalohany
Taorian’ny fandresena ny 1 janoary, azon’ny mpikatroka malagasy any Sina, amin’ny taranja “Combat Pro K1”, ny 26 janoary izao indray no hiverina hiatrika ady izy ireo. Hampiavaka ity manaraka ity ny tsapan’ady voalohany ho an’ny mpikatroka miisa efatra ka vehivavy ny iray amin’ireo.
Mitohy ny ady handraisan’i Madagasikara anjara any Sina. Hiditra an-tsehatra ny mpikatroka avy amin’ny Team Namana Fighter, ekipa malagasy mpiangaly ny taranja “combat pro” ary manana mpikatroka mpila ravinahitra sy manandratra avo ny lentan’ny kick boxing K1 any Sina. Hampiavaka ny amin’io fotoana io ny fandraisana anjaran’ilay teratany malagasy vehivavy antsoina hoe Rasoarinoro Fahendrena, sokajin-danja 56 kg. Ity farany izay hiatrika ny tsapan’ady voalohany miaraka amin’ireo namany miisa telo mirahalahy: i Menavolo (58 kg), i Billy (58 kg) ary i Birinod (63 kg).
Ankoatra azy efatra mianadahy ireo, anisany mbola ho tazana ao anatin’ny fifaninanana ihany koa ireo telo mirahalahy efa mpiady hatramin’izay. Anisan’izany i Faray (61 kg), vao avy nibata fandresena ny 1 janoary lasa teo. Eo ihany koa i Mickael (65 kg) sy i Voary (70 kg). Miisa fito mianadahy, araka izany, ireo hitondra avo ny anaran’i Madagasikara mandritra ity fifaninanana ity. Marihina fa io ady ny 26 janoary no ady farany hatrehina ary amin’ny volana marsa indray vao ho tazana ny mpikatroka malagasy, vokatr’ilay fankalazana ny taom-baovao sinoa, tanterahina mandritra ny 1 volana eo.
Tsy nanadino nirary soa ny Malagasy ny mpikambana ao amin’ny Team Namana Fighter, amin’izao taona vaovao izao. “Faly miarahaba ny Malagasy rehetra ny ekipan’ny Team Fighter amin’izao taona vaovao izao. Izahay izay mila ravinahitra sy mitondra avo ny lentan’ny mpikatroka malagasy eo anivon’ny taranja kick boxing, K1, aty Sina”, hoy ny fiarahabana nentin’ny mpanazatra ireo mpikatroka any Sina, i Jakoba Gilbert. Mampanantena ny hibata fandresena hatrany ireto mpiangaly taranja kick boxing any Sina ireto.